Igumbi ELIWONA KAWAGOE(14DAYS-QUARANTINE-OK)
Iflethi eqeshisayo yonke sinombuki zindwendwe onguSatomi
Kukho ikhitshi, igumbi lokuhlambela elinendlu yangasese egumbini.
Igumbi lelakho kuphela, akukho sabelo nezinye iindwendwe.
Izikhululo ezi-2 ezikufutshane
OMNYE nguJR KAWAGOE LINE-Matoba Sta.8min walk (ukuya eKawagoe, Ikebukuro, Shinjuku, Harajuku, Shibuya) JR PASS ingasetyenziswa
ENYE yi TOBUTOJO LINE-Kasumigaseki Sta.15min walk ( ukuya eYokohama)
I-RROUNDING (umgama wokuhamba)
24H ivenkile elula FAMILY-MART-3min
Ivenkile enkulu -10min
Thatha ibhasi yemoto eya eKawagoe Sta. kwaye emva koko udlulisele kumgca we-JR Kawagoe ukuya eMatoba Sta.
Thatha umgca weKeikyu ukuya eShinagawa Sta. kwaye emva koko udlulisele kumgca we-JR Saikyo ukuya eKawagoe Sta. kwaye emva koko udlulisele kumgca we-JR Kawagoe ukuya eMatoba Sta. (ngaphandle komgca weKeikyu, wonke uloliwe angasetyenziswa ngu JR PASS)
Thatha ibhasi yeTobu eya eKawagoe Sta. kwaye emva koko udlulisele kumgca we-JR Kawagoe ukuya eMatoba Sta.
Thatha iJR Narita Express (uloliwe) ukuya eShinjuku Sta. kwaye emva koko udlulisele kumgca we-JR Saikyo ukuya eKawagoe Sta. kwaye emva koko udlulisele kumgca we-JR Kawagoe ukuya eMatoba Sta. (I-JR PASS ingasetyenziswa)
Thatha i-Skyliner ukuya eNippori Sta. uze udlulisele kumgca JR Yamanote ukuya Ikebukuro Sta. kwaye emva koko udlulisele kumgca we-JR Saikyo ukuya eKawagoe Sta. kwaye emva koko udlulisele kumgca we-JR Kawagoe ukuya eMatoba Sta. (ngaphandle kweSkyliner, wonke uloliwe angasetyenziswa ngu JR PASS)
Thatha i-shinkansen uye eTokyo Sta. kwaye emva koko udlulisele kwi-JR CHUO LINE ukuya eShinjuku Sta. kwaye emva koko udlulisele kwi-JR SAIKYO LINE ukuya eKawagoe Sta. kwaye emva koko udlulisele kwi-JR KAWAGOE LINE ukuya kwi-MATOBA Sta.
Ngena: Ukususela ngo-3:00 PM
Ukuphuma: Ngaphambi kwe-11:00 AM
•Yehlisa ilizwi egumbini.
•Gcina umculo phantsi.
Umbuzo: Ngaba kunokwenzeka ukuba ungene kwangethuba?
A: Ngena ngo 15:00. Kukho iqela leendwendwe khangela ngaloo mini. Kwaye ke inkampani yokucoca iya kuwugqiba umsebenzi wayo ngo-15:00.
Umbuzo: Ngaba kunokwenzeka ukuba uphume emva kwexesha?
A: Ukuphuma ngu 11:00am. Ngenxa yokuba inkampani yokucoca kufuneka icoce igumbi lomthengi olandelayo. Nceda uthathe imithwalo xa uphuma. Ungashiya imithwalo eKawagoe Sta. apho kukho iziko lenkonzo elibizwa ngokuba yi-"KAWAGOE STATION TOURIST INFORMATION OFFICE" Ixabisa iJPY 500 ngomthwalo ngamnye.
Umbuzo: Ndingasifumana njani isitshixo?
A: Emva kokuba ugcino luqinisekisiwe, ndiya kukuthumelela ISIKHOKELO SOKUFIKELELA.pdf ukukuxelela indlela yokufumana isitshixo. Inokukunceda ukusuka eNarita okanye kwisikhululo seenqwelomoya saseHaneda okanye kwiSikhululo saseTokyo ngokutyibilikayo.
Umbuki zindwendwe ngu- Satomi
Inombolo yomthetho: I-Hotels and Inns Business Act | 埼玉県川越市保健所 | 川食収第1135号
Idiphozithi Yokhuseleko - ukuba wenza umonakalo kwikhaya, usenokubhataliswa ukuya kutsho kwi-$880
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Kawagoe